Uyisebenzisa njani iTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyisebenzisa njani iTelegram?
Epreli 27, 2021 0 IiCententarios 186
¿Awukayilandeli iTelegram okwangoku? Sukuhlala ulinde iteknoloji ukuba iqhubele phambili. Namhlanje ungafikelela kwesi sicelo simangalisayo kwaye uqalise ukuncokola nabahlobo bakho. Insiza iyafumaneka kumaqonga aphambili edijithali kwaye unokufunda ukuyisebenzisa kwimizuzu embalwa.
Uninzi lwabasebenzisi bayisebenzisa iWhatsApp, ngaphandle Nangona kunjalo, kukho ezinye iindlela ezingcono. kunale. Umzekelo ocacileyo woku sisicelo seTelegram, esithe saya emarikeni sabangela zonke iintlobo zeemvakalelo. Ngeli xesha sifuna ukukufundisa indlela yokusebenzisa iTelegram ngokukhawuleza kwaye kulula.
Ukuba ufuna ukufunda ukusebenzisa iTelegram Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukukhuphela usetyenziso. Ungayenza nakweyiphi na ivenkile yesicelo kwaye ukhuphelo lusimahla.
Sukucinga kabini uze uye phambili kwaye ukhuphele esi sicelo semiyalezo sikhulu. Apha uya kufumana uluhlu olubanzi lweendlela oza kuzithanda. Le app imfutshane kakhulu, ibandakanya i-bots ecwangcisiweyo kwaye inokusetyenziselwa ukwenza imali ekhaya.
Uyenza njani iakhawunti yeTelegram ngokulula
Ukuba sele uzimisele ukukhuphela iTelegram emva koko nikela ingqalelo kwinto esiza kuchaza yona ngokulandelayo. Ukwenza iakhawunti kwesi sicelo akukho nzima njengoko uninzi lwabasebenzisi lucinga. Uya kudinga kuphela iselfowuni kunye nonxibelelwano lwe-intanethi.
Ukukhuphela isicelo kwifowuni yakho ephathekayo
Vula usetyenziso ukuqala ubhaliso
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukucofa iqhosha "Qalisa umyalezo":
Ngoku kufuneka khetha ilizwe apho ukhoyo uze ubonise inombolo yakho yefowuni.
Kubalulekile ukuba ubonise u inombolo esebenzayo kunye esebenzayo, njengoko isicelo siza kukuthumela ikhowudi yokuqinisekisa.
El código uya kuyifumana ngeSMS.
Chwetheza ikhowudi apho isixelela khona isixokelelwano
Kakuhle kakhulu. Iakhawunti yethu yeTelegram yenziwe. Kufuneka uyiqwalasele.
Ukugqiba i ukuseta Kuya kufuneka ufake igama lakho kunye nefani.
Iakhawunti yethu sele iyasebenza kwaye ikulungele ukuqala ukuyisebenzisa. Inyani yile yokuba ukusebenzisa olu hlobo lwesicelo kulula kakhulu, ngakumbi ukuba into esifuna ukuyenza kukuthumela kunye nokufumana imiyalezo.
Ixesha elingaphezulu siya kufunda imisebenzi emitsha kwaye sonke siya kuba ziingcali kwisicelo. Okwangoku eyona nto ibalulekileyo yile funda iziseko.
Ukuthumela umyalezo ngeTelegram Kufuneka kuqala ukhethe umntu esifuna ukubhala kuye kwaye kunjalo. Unokuthetha nomntu ngamnye, njani? Kulula oko:
cofa ngaphezulu kwe icon yeepensile eluhlaza okwesibhakabhaka
Khetha umntu ofuna ukumbhalela
Bhala umyalezo uze ucinezele "thumela"
Kwesi sicelo nawe unethuba thumela iifayile ezinjengeefoto, iividiyo, umculo kunye namaxwebhu. Indlela yokwenza kulula. Kuya kufuneka uvule ingxoxo, ukhethe umfowunelwa, ucofe i-icon yokufaka, khangela ifayile ofuna ukuyithumela kwaye yiyo loo nto.
1 Khuphela isicelo
2 Uyenza njani iakhawunti yeTelegram ngokulula
3 Sebenzisa iapp
Indlela yokwenza ubungakanani besitayile kwiTelegram
Ndingathanda ukwabelana ngamabali e-Instagram kwezinye iinethiwekhi zam.